Tattoo, Maktub, eray Carabi ah oo qaali ah | Tattoo
Tattoo tattoo, erey Carabi ah oo qurux badan
ka xaraashka laga bilaabo maktub waxay ku saleysan yihiin erey carabi ah oo qurux badan, oo leh macno qoto dheer, oo ku habboon miisaanka iyo gabal yar.
Haddii aad rabto si sax ah u ogaato macnaha eraygan iyo sida looga faa'iideysto a tattoo, Waxaan hoos ku aragnaa!
1 Maktub, laba macne oo macquul ah hal
2 Sidee looga faa'iideysan karaa tattoo?
Maktub, laba macne oo macquul ah hal
Ereyga maktub Waxaa lagu qori karaa laba qaab oo Carabi ah, labada qaabna waxay leeyihiin laba macne oo kala duwan, laakiin aad isugu eg. Ugu horreyntii waxaan leenahay مكتوب, oo macno ahaan macnaheedu yahay 'waa qoran tahay', laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsadaa macnaha guud ee warqad loo diro, tusaale ahaan.
Micnaha labaad ayaa aad uga qoto dheer. نصيب macno badan oo la mid ah ayay u leedahay 'aayaha'. Sidii kiiskii hore, macno ahaan waxaa loola jeedaa 'waa qoran tahay', laakiin dhab ahaantii waxay ula jeedaa xaqiiqda ah in wax walba la qoray, taas oo ah, waa inaanan dareemin walaac mustaqbalka maxaa yeelay wax walba way imaan doonaan, in kastoo mararka qaar waddadu aysan tii aan filaynay.
Sida cajiib ah laba shaqo ayaa ereygan ku isticmaalay Carabi iyo macnihiisa: maktub, Filim 2011 ku saabsan nin saaxiib la ah wiil xanuun daran qaba, iyo buug uu qoray Paulo Coelho.
Sidee looga faa'iideysan karaa tattoo?
Tattoo-ka maktub badanaa wuxuu raacaa tilmaamo isku mid ah sida tattoo oo leh ereyo kasta, inkasta oo ay jirto kala duwanaansho, maadaama aad u baahan tahay inaad isweydiiso haddii aad rabto inaad ereyga ku qorto alifkeena ama Carabi. Qaar kale xitaa waxay doortaan inay labada isku daraan.
Si kastaba ha ahaatee, Tattoo-yadaani waxay si gaar ah ugufiican yihiin qaababka fudud iyo kuwa yaryar, caqli badan, oo macnaheeda loo adeegsan karo waqtiga dhibaatada sida eray raaxo leh ama xitaa loo akhrin karo mantra, iyo sidoo kale in adduunka loo muujiyo muuqaalkeena muhiimka ah.
Tattoo-yada maktubku waa quruxsan yihiin, sax? Noo sheeg, ma leedahay tattoo sidan ah? Sideed u aragtaa macnaheeda? Noo sheeg wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoo tattoo, erey Carabi ah oo qurux badan
Tattoos of Earth, adduunka oo dhan maqaarkaaga
Miisaanka saxeexa tattoos